सावधान, पानीपुरीले ज्यान लिन सक्छ है ! – Makalukhabar.com
सावधान, पानीपुरीले ज्यान लिन सक्छ है !
काठमाडौं, साउन १८ । गर्मीयाम शुरु भएसँगै अमिलो पिरो खान मन लाग्नु स्वभाविक हो । विशेषगरी आजभोली बालबच्चादेखि वृद्धवृद्धा सम्मको रोजाइँमा परेको अमिलो पिरो खानेकुरा भनेको पानीपुरी, चटपटे हो ।
पानीपुरी, चटपटे भन्ने बित्तिकै झट्ट हामी खानै नहुने सोच्छौँ तर खान भने छोड्दैनौँ । यसमा मिसाइने हानिकारक सामग्रीहरु, जसले हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता नष्ट गरिदिन्छ र हामीलाई रोगी बनाइदिन्छ । विशेषगरी वर्षायाममा यसले पानीजन्य रोगहरु निम्त्याउन सक्छ ।
हरेक खानेकुराको आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन् । समय, स्थान र प्रयोगको आधारमा यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । कुन चीज कति मात्रामा खाँदा शरीरलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा विरलैलाई थाहा हुने गर्छ भने कतिपयले थाहा भएतापनि यसलाई साधारण विषयको रुपमा लिने गर्छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरालाई सामान्य रुपमा लिँदा कतिपयले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ त कतिले आजीवन अपांगता खेप्नु परेको छ ।
जति नै पोषिलो र तागतवद्र्धक खानेकुरा किन नहोस्, धेरै खाएमा त्यो अक्सर विष बन्न सक्छ । यदि स्वस्थ तरिकाले बनाएर खान जानेनौँ भने पानीपुरी र चटपटेले पनि ज्यान लिन सक्छ । हानिकारक वस्तुको प्रयोग नगरी सफा तरिकाले घरमै बनाएर ठिक्क मात्रामा खाने हो भने यसले असर गर्दैन ।
पानीपुरी, चटपटेमा मिसाइने (भेनेगर) एसिड, जसलाई पानीपुरी र चटपटे बनाउँदा अमिलोको रुपमा प्रयोग गरिन्छ, यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने पोषणविदहरु बताउँछन् । घरमै स्वच्छ र सफा तरिकाले बनाएर खाने हो भने पानीपुरी र चटपटेले कुनै असर नगर्ने पोषणविद केपी लम्सालको भनाइ छ । ‘अमिलो पिरो खानेबित्तिकै स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने हुँदैन, तर काठमाडौँको वातावरण र खानाको क्वालिटी हेर्ने हो भने पानीपुरी, चटपटे होस् या अन्य खाना, केही पनि खान लायकको छैन’ उनले भने ।
यस्ता विषादीयुक्त र दुषित खानेकुराले सामान्यदेखि जटिल रोगहरुको संक्रमण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले डब्लुएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को सम्मेलनले समेत पानीपुरी र चटपटेमा ज्यानै लिने खालका ब्याक्टेरिया र भाइरसहरु हुने पुष्टि गरेको बताए ।
सरसफाइ मेन्टेन नगरी बनाइएका यस्ता दुषित खानेकुराले झाडापखाला, टाउको दुख्ने, रुघा खोकी, घाँटी दुख्ने, टन्सिल, पाचन प्रक्रियामा समस्या आउने, एसिडिटी बढाउने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ भने, आन्द्रामा घाउ हुने, पेट दुख्ने लगायत ज्यानै समेत लिन सक्ने पोषणविद् लम्सालको दावी छ । प्राकृतिक अमिलो जस्तै सुन्तला, भोगटे, कागती आदिमा भिटामिन सी प्रशस्त पाइने हुनाले यसले भने स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँदैन ।
पोषणविद् लम्सालका अनुसार, चटपटेमा अखाद्य रङ, अजिनोमोटो, अनावश्यक मरमसला प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले हाम्रो शरिरको न्युक्लियसलाई खियाउँछ र कमजोर बनाउँछ । यसले रोगसँग लड्ने क्षमता समेत नष्ट गरिदिन्छ । केही समयअघि पानीपुरीमा हार्पिक समेत मिसाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
पोषणविद नानीशोभा शाक्यले घरमै बनाएर ठिक्क मात्रामा खाने हो भने पानीपुरी र चटपटेले कुनै असर नगर्ने बताइन् । ‘स्वस्थकर हिसाबले हाइजेनिक मेन्टेन गरेर बनाइ कहिलेकाहीँ खाने हो भने पानीपुरीले कुनै असर गर्दैन’ उनले भनिन् ।
अहिले पानी पर्ने मौसममा फुटपाथमा राखिएका धुवाँ धुलोयुक्त तथा हाइजेनिक मेन्टेन नगरी बनाइएका चटपटे खाने हो भने ग्याष्ट्रिक, फुड पोइजनिङ, हेपाटाइटिस, पानीजन्य रोगः टाइफाइड लगायतका संक्रमण देखा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
भनिन्छ गुलियो धेरै खायो भने तितो हुन्छ । पानीपुरी चटपटेको नामै लिँदा तपाई हाम्रो मुखमा पानी आउँछ । धुलोमैलो वातावरणमा अस्वस्थकर रुपमा बनाइएका यस्ता खानेकुराले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने हानीको विषयमा सजग हुन आवश्यक छ, त्यसमा पनि पानीपुरी, चटपटे भन्ने वित्तिकै मरीमेट्ने युवतीहरुले ।
प्रस्तुतिः सृष्टि नेपाल“